Xog-NISA oo qalab sirdoon iyo saanad ciidan ka heleysa Turkiga. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xog-NISA oo qalab sirdoon iyo saanad ciidan ka heleysa Turkiga.
Hey’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa todobaadyada soo aadan waxay dowladda Turkiga ka heleysaa qalab loo adeegsado basaaska sirdoonada iyo sidoo kale saanad ciidan oo gawaari kamid yihiin.
Xogahan soo baxaya ee ku aadan NISA tageerada ay ka heleyso dowladda Turkiga ayaa imaanaya iyadoo uu madaxweyne Farmaajo maalmaha soo socda wafdi uu hogaaminayo safar ku tagayaan dalkaasi turkiga kadib casuumaad uu soo diray Erdugan.
Ilo wareedyo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in wafdiga madaxweyne Farmaajo uu qeyb ka yahay madaxa mukhaabaraadka sirdoonka Soomaaliya ahna Taliyaha dabagalka ee hey’adda NISA Korneel Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere ku magac dheer islamarkaana uu wado qorshaha ay NISA taageerada kaga heleyso dowladda Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa kamid ah dowladaha awoodda ciidan ku leh caalamka, soona saarta gaadiidyada dhulka iyo cirka ee howlagalada loo adeegsado, marar badanna waxay Soomaaliya siiyay qalab millatari.
Balse qabiirada dhinaca amaanka ayaa rumeysan in ay aad u badan tahay fursadda ay dowladda Soomaaliya xilligan Turkiga kaga heli karto qalab loo adeegsado basaasidda casriga ee sirdoonada loogu talagalay, iyadoo sidoo kale NISA ay waayihii u danbeeyay xoojisay qorsheyaasha helitaanka xogaha sirdoon.
Sarkaalka xilligan awoodda ku leh NISA madaxna uga ah Mukhaabaraadka iyo dabagalka ee Cabdullahi Dheere ayaa saraakiisha aqoonta u leh waxay tilmaameen inuu muddo sanad ah ka soo shaqeynayay sidii Turkiga taageero qalab ah u siin lahaayeen nabad sugidda Soomaaliya, inkasta oo aan laga helin xog rasmi ah oo ku aadan qalabka uu dalbaday.
Xubno kamid ah mas’uuliyiinta safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in wafdiga madaxweyne Farmaajo ay safrayaan maalmaha soo socda, iyadoona dhanka dowladda Turkiga eegi doonto heshiisyada ay la shir tagaan wafdiga Soomaaliya,
Dhinaca kale Korneel Cabdullahi Dheere oo kamid ah wafdiga maalmaha soo socda u safrayo Turkiga ee Farmaajo uu hogaaminayo ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inuu kaalin weyn kulahaa xil ka qaadistii lagu sameeyay wasiirkii arimaha dibadda, isagoona ka gudbiyay macluumaad ay adkaatay in warbaahintu u hesho si sax ah.
Dadka siyaasadda sida dhaw ula socda ayaa tilmaamay in afartii sano ee la dhaafay taariikhaha qormay ay kamid tahay in sirdoonka ay xitaa u duseen xogaha xiriirada iyo qaabilaadda ay wasiirada sameeyaan, taasi oo keentay in wasiiro badan mudadaasi xilalkooda ku waayeen si lama filaan ah.
Lama sii saadaalin karo sida ay midowga musharaxiinta iyo maamul goboleedyada uga falcelin doonaan heshiiska la filayo in Turkiga uu Soomaaliya kaga taageero dhanka sirdoonka, xilli wali uu dalku ku jiro jahwareer siyaasadeed.
Previous articleNGO Poland laga leeyahay ayaa badbaadiyay muhaajiriin Suuriyaan ah oo ka soo gudbay xadka Belarus
Next articleXog-Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya.